यस्ता छन् गर्भधारण गराउने तरिका, कसरी भित्र झार्ने वीर्य ? – Mission
यस्ता छन् गर्भधारण गराउने तरिका, कसरी भित्र झार्ने वीर्य ?
काठमाडौं । पतिपत्नीका बीच यौन सम्बन्धको एउटा लक्ष्य आमाबाबु बन्न पनि हुन्छ । वात्सयायनको कामसूत्रमा सम्भोगको स्थिति अर्थात ती पोजिसनका विषयमा बताइएको छ । सोही अनुसार सेक्स गर्दा गर्भधारण हुन्छ भन्ने मान्यता परीक्षणले समेत देखाएको छ ।
आज तपाईलाई त्यस्तै केही पोजिशन र टिप्सका विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ । यसले गर्दा महिलामा गर्भधारण हुन सक्छ । गर्भधारणका लागि दुई वटा पोजिशनमा सेक्स गदा फलदायी हुन्छ ।
मिशनरी पोजिशन (महिलाको माथि चढेर गर्ने सेक्स)
यो अवस्थामा संभोग गर्ने बेला पुरुष महिलाको माथि हुन्छ । यो पोजिशनमा सेक्स गर्दा पुरुषको वीर्य सीधा स्त्रीको गर्भाशयसम्म सीधा पुग्छ । पुरुष महिलाको माथि हुँदा गर्भधारण सजिलै हुन्छ । यदि स्त्री पुरुषको माथि हुन्छिन् भने गर्भधारणको संभावना अत्यन्तै कम हुन्छ ।
ह्यान्ड एण्ड नी पोजीशन (डग स्टाइल)
डग स्टाइलमा स्त्री घुँडा र हाथले टेकेर घोप्टो पर्ने गर्छिन् । अनि पुरुषले पछाडिबाट सेक्स गर्छ । यस्तो अवस्थामा वीर्य आरामले महिलाको गर्भाशयसम्म पुग्छ । यसरी सेक्स गरिसकेपछि केही समय आराम गर्दा राम्रो हुन्छ । गर्भका लागि सेक्स गरिसकेपछि महिला कहिल्यै पनि उफ्रनु हुँदैछ । र सेक्स गरिसकेपछि महिला कहिल्यै पनि तुरुन्त उठ्नु पनि हुँदैन ।
यदि तपाईले मिशनरी पोजिशनमा सेक्स गर्नु भएको छ भने संभोग गर्ने बेला वा संभाग गरिसकेपछि स्त्रीको कम्मर मुनि रिसानी राख्नु पर्छ ।
त्यसले वीर्यलाई सिधा यौनीभित्र पुगाउन मद्दत गर्छ । यसरी सेक्स गरिसकेपछि स्त्री करिब आधा घण्टासम्म ओछ्यानमा पल्टी रहनु उचित हुन्छ ।
कसै कसैले संभोगपछि स्त्री कुममार्फत पल्टिएर उठ्दा पनि गर्भधारणको सम्भावना हुने मान्छन् । तर यो फलदायी भएको प्रमाण भेटिएको छैन ।
रातिको तुलनामा वीर्यमा शुक्राणुको संख्या दिनमा धेरै हुन्छ । एक अनुसन्धानमा गर्भधारणका लागि सेक्सको सही समय बेलुका पाँच बजेदेखि सात बजेसम्मलाई उचित मानिन्छ । यो समयमा वीर्यमा शुक्राणुको संख्या करीब ३५ प्रतिशतसम्म ज्यादा हुन्छ । यो समयमा महिलाको अन्डाशय पनि छिटोछिटो सक्रिय हुने गर्छ ।
स्त्रीको मासिक धर्मलाई पनि सेक्सका बेला ध्यान राखनु पर्छ । सेक्स गर्ने बेला महिला कहिल्यै पनि पुरुषको माथि नचढ्ने । यस्तो बेला शुक्राणु सर्विक्समा नै अड्किएर बस्न सक्छ । फेरि वापस आफ्नो स्थानमा आएर बस्न सक्छ । ती शुक्राणु अंडाशयसम्म पुग्न सक्दैनन् ।
गर्भधारणका लागि महिलाको पछाडिबाट वा छेउमा सुतेर पनि सेक्स गर्नु उचित मानिदैन । उठेर गरिने सेक्सले पनि भर्गधारण हुन सक्दैन । यस अवस्थामा सेक्स गर्दा शुक्राणु गर्भाशयमा जम्मा भएर जाम भइ बस्छन् ।
हो कतिपय समयमा वीर्य निस्कने समय शुक्राणुको गति धेरै हुन्छ । ज्यादा प्रवाह हुनुका कारण शुक्राणु आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्छन् र गर्भधारण पनि हुन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ११, २०७२ 2:00:43 PM |
Next बैंक र व्यवसायीबीच बजारमूल्यका बिषयमा छलफल